Art is My Life: မရှင်းလင်းနိုင်ဟု ယူဆရသော အချက်အလက်များ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:52 PM
လုပ်ပေ့ါဗျာ. ရှင်တို့က ရဲတွေကိုး….
ကျွန်တော်လည်း နီဂရိုးမလေးရဲ့ ဒါလင်ဖြစ်လိုက်၊ မာမီရန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ လူပေါင်းတော့ မှားပြီနဲ့တူပါတယ်ဗျာ…
အစ်ကိုရေ - myanmar music မှာ ကျွန်တော့် Blog လေးမပါသေးလို့ပါ။ Blog Name ကတော့ Myanmar OA6 ပါ။ ရေးတဲ့သူကတော့ ကျွန်တော် Mr.Pooh ပေါ့နော့်။ ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော် စဖတ်တော့မယ်နော်။
အဟိ.. မာမီရန် တဲ့ =)